अष्ट्रेलिया को लागी भिसा कसरी पाउने यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अष्ट्रेलिया, सुझावहरू
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एक उत्तम पर्यटन गन्तव्य अष्ट्रेलिया हो। देश यसको प्राकृतिक परिदृश्य को दृष्टिबाट सुन्दर छ र युरोपियन व्यवसायको लामो इतिहास छैन भने पनि यसको समृद्ध र प्राचीन मूल संस्कृति छ।
अष्ट्रेलिया यो एक विकसित देश हो, कम जनसंख्याको साथ, आधुनिक र अझै बढ्दैछ। थप रूपमा, यो एक चाखलाग्दो छ भिसा प्रणाली त्यसो गर्न मात्र अनुमति दिन्छ पर्यटन तर अब काम गर्न अध्ययन गर्नुहोस् र यो युवा मानिस र चंचल आत्माहरु को लक्ष मा विशेष भिसा प्रदान गर्दछ। के तपाईंलाई यो विचार मनपर्‍यो? यहाँ तपाईं बारे मा आवश्यक जानकारी छ अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी पाउने।
2 अष्ट्रेलियाबाट भिसाका प्रकार प्रदान गरियो
पहिलो स्थानमा, तपाईको देशमा रहेको अष्ट्रेलियाली दूतावाससँग जहिले पनि जाँच गर्नु उत्तम हुन्छ किनभने स्पष्ट रूपमा भिसा सर्तहरू देश अनुसार फरक फरक हुन्छन्। स्पेनको मामलामा, यहाँ दूतावासले स्पेन, अन्डोरा र इक्वेटोरियल गुयनासँग काम गर्छ।
दुई देशहरूबीच कूटनीतिक गतिविधिको परिणामस्वरूप व्यापार सम्झौता भएको छ र यस प्रकार हालसालै कम्तिमा सयौं स्पेनी कम्पनी प्रशान्त मुलुकमा अवतरण गरिसकेका छन्। अन्य कम्पनीहरूले सैन्य सम्झौता जितेका छन् र दुवै राज्यको नौसेना बीच सहयोग सम्झौता पनि छन्। भिसाको सम्बन्धमा तपाईले अवश्य अध्यागमन र नागरिकता विभाग को वेबसाइट हेर्नुहोस्, म्याड्रिडमा शारीरिक मुख्यालयको साथ।
यहाँ, भिसा र आप्रवासन सेक्सन भिसा आवेदन प्रक्रिया गर्दछ।
अष्ट्रेलियाबाट भिसाका प्रकार प्रदान गरियो
आगन्तुकहरुका लागि भिसाको सर्तमा, अष्ट्रेलियाले प्रदान गर्दछ eVisitor, ट्रान्जिट भिसा, आगन्तुक भिसा, कार्य र छुट्टी भिसा र कार्यरत छुट्टी भिसा। यदि तपाईं युरोपियन युनियनका नागरिक हुनुहुन्छ र व्यापार वा खुशीको लागि अष्ट्रेलिया जान चाहानुहुन्छ भने तपाईले कोटी भिसाका लागि आवेदन दिनै पर्छ eVisitor.
रमाईलो यात्राले छुट्टिहरू, परिवार भ्रमणहरू, परिचितहरू र साथीहरूलाई भ्रमण गर्दछ। एक व्यवसाय यात्रा सम्मेलनमा उपस्थित, व्यवसाय, निर्धारित भ्रमण, र यस्तै। यस प्रकारको इविसाले तपाईंलाई अष्ट्रेलियामा काम गर्न अनुमति दिदैन, यदि तपाईको विचार हो भने तपाईले अस्थायी कार्य भिसाको अर्को प्रकारको भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्नेछ।
EVisitor ले तपाईंलाई बाह्र महिनाको अवधिमा अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न र छोड्न अनुमति दिन्छ उहीको जारीको मितिबाट। प्रत्येक पटक जब तपाईं त्यस वर्ष देशमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई अधिकतम तीन महिनासम्म रहन अनुमति दिइनेछ। भिसा सित्तैंमा छ र यो इलेक्ट्रोनिक भएकोले यो राहदानी नम्बरमा जोडिएको छ र तपाईंलाई अर्को भौतिक कागजातको आवश्यक पर्दैन। यसलाई प्रक्रिया गर्न तपाईले अनलाइन आवेदन पठाउनुहुन्छ र यदि तपाईं समूह वा परिवारमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले समूह सहित प्रत्येक सदस्यको लागि आवेदन बुझाउनु पर्छ, बच्चाहरू सहित।
अनलाइन तपाईं भिसा आवेदनहरूको प्रक्रियाको समय थाहा पाउन सक्नुहुनेछ जुन प्रत्येक आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ: गति जससँग तपाईं जवाफ दिनुहुन्छ भने थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस्, कि तपाईंले सबै आवश्यक कागजातहरू सबमिट गर्नुभएको छ वा छैन, समयहरू जसमा प्रासंगिक अधिकारीहरूले आपराधिक रेकर्ड, कोषको ग्यारेन्टी र त्यस्ता विषयमा वितरण गर्छन्, र यस्तै।
र दूतावासको तर्फबाट आप्रवास कार्यक्रममा उपलब्ध स्थानहरूको संख्या वा वर्षको समय जुनमा आवेदन प्रक्रिया गरिएको छ, चाहे यो उच्च मौसम हो वा होइन, उदाहरणको लागि यसले पनि प्रभाव पार्छ।
La ट्रांजिट भिसा (सबक्लास 771 XNUMX१) देशभरि जानका लागि अनुमति हो 72२ घण्टा मात्र। तपाईंसँग अर्को देशमा प्रवेश गर्न कागजातहरू हुनुपर्दछ, तपाईंको वास्तविक गन्तव्य र यो पनि होaनि: शुल्क भिसा। यो सामान्यतया केवल आठ दिन वा पाँच मा प्रशोधन गरिन्छ। उनीहरूले स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको लागि सोध्न सक्छन् तर तपाईंले दूतावासले यसको अनुरोधको लागि पर्खनु पर्दछ।
La आगन्तुक भिसा, subclass 600, तपाईंलाई अनुमति दिन्छ व्यापारको लागि प्रविष्ट गर्नुहोस् र तीन, छ वा बाह्र महिना रहनुहोस्। तपाई एक आगन्तुक हुनुहुन्छ तपाईंलाई काम गर्न अनुमति दिदैन। यो भिसा प्रशोधन गर्न एडीडी १ 140० देखि एउडी १०२० सम्म लागत छ। एक पर्यटक भिसा २२ दिन र एक महिनाको बीचमा लिन सक्दछ। व्यावसायिक भ्रमणको लागि समय धेरै कम छ।
La कार्य र छुट्टी भिसा, subclass 462, विशेष छ एक वर्षको लागि अष्ट्रेलियामा छुट्टी दिन र केहि काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि। तपाई कम्तिमा १ 18 बर्षको हुनुपर्दछ र 31१ बर्ष भन्दा बढी उमेरको हुनु हुँदैन, आश्रित बच्चाहरु नहुने र अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, चिली, पेरू, उरुग्वे र स्पेनको नागरिक बन्नु पर्छ, उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलिया बन्द भएका देशहरुको समूह मध्ये। यो सम्झौता। यी भिसाहरू प्राय: 33 and र। 77 दिन बीचमा प्रशोधन गरिन्छ।
भिसा तपाइँलाई एक बर्ष रहन र कम्तिमा छ महिना काम गर्न, चार महिना अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ र छोड्नुहोस् र त्यस वर्षमा तपाईले चाहानु भएको जति पटक देशमा प्रवेश गर्नुहोस्। तपाईंले यो कुरा मनमा राख्नु पर्छ कि अष्ट्रेलियाले प्रति देश सीमित संख्यामा काम र छुट्टी भिसा प्रदान गर्दछ, त्यसैले यदि साहसिक कार्यले तपाईंको रूचि राख्दछ भने तपाईंले द्रुत चीजहरू गर्नुपर्दछ। प्रक्रिया नि: शुल्क छ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ वर्किंग हलिडे भिसा छ, सबक्लास 417१31, बितेको पछिल्लो जस्तो। यस अवस्थामा अष्ट्रेलिया सरकारले उमेर सीमा 35१ बाट XNUMX XNUMX वर्ष पुर्याउने सोचमा छ।
अवश्य पनि अरु पनि छन् व्यापार भिसा, अध्ययन भिसा, एक अष्ट्रेलियाको नागरिक र मानवीय भिसा विवाह गर्न र शरणार्थीहरू, चिकित्सा उपचारको लागि, र यस्तै। यस अवस्थामा अध्ययन भिसा, अन्य भिसा जुन हामीलाई चाखलाग्दो हुन सक्छ, त्यहाँ तीन कोटीहरू छन्। हो विद्यार्थी वीजा, सबक्लास 500००, जसले तपाईंलाई एक शैक्षिक संस्थामा तपाईंको अध्ययनको अवधिमा रहन अधिकार दिन्छ। विद्यार्थी कम्तिमा छ वर्षको हुनुपर्दछ, संस्थाले तपाइँलाई स्वीकार्नुपर्दछ र तपाइँसँग चिकित्सा बीमा हुनुपर्दछ। यसले तपाइँलाई पाँच बर्ष सम्म रहन अनुमति दिन्छ र लागत AU560० लागत।
La छात्र अभिभावक भिसा यो उनीहरूलाई दिइन्छ जसले १ in बर्ष भन्दा कम उमेरको एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ख्याल राख्नु पर्ने छ जुन यो देशमा अध्ययन गर्दा हो। तपाईं एक सापेक्ष वा कानूनी अभिभावक हुनुपर्दछ, बाँच्नको लागि पर्याप्त पैसा छ र कम्तिमा २१ बर्षको हुनु पर्छ। यसको समान लागत छ। र अन्तमा त्यहाँ छ प्रशिक्षण भिसा त्यो ती व्यक्तिलाई डेलिभर गरिन्छ जुन पेशेवरहरू हुन् र उनीहरूको क्षेत्रको विशेषज्ञ हुन चाहन्छन वा देशको कुनै कार्यक्रममा भाग लिन चाहान्छन्। तपाईं कम्तिमा १ 18 वर्षको हुनुपर्दछ, तपाईंलाई अधिकतम दुई र स्वाभाविक रूपमा रहने अनुमति छ, त्यहाँ कम्पनी वा संस्थाबाट आमन्त्रित हुन अनिवार्य छ। लागत २D० AUD हो।
मलाई लाग्छ कि यी भिसाहरु बीचमा तपाई निश्चित रूपमा भेट्नुहुनेछ जुन तपाईको यात्रा आवश्यकता र ईच्छा अनुसार मिल्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » ओशिनिया » अष्ट्रेलिया » अष्ट्रेलियाका लागि भिसा कसरी पाउने